Mashaariicdii ee Ururka Iskaashiga Islaamka (IOC) ee Somalia lagu musuqmaasuqay. [Galka Baarista] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Mashaariicdii uu Soomaaliya ka waday Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ayaa six un loo maamulay, loona musuqmaasuqay. iyadoo aan waxba laga hirgelin shan mashruuc oo lacagta ku baxday ay gaareysay $6.6 milyan in ka badan 5 sano kadib markii la bilaabay.
Mashaariicda la musuqmaasuqay ee uruka OIC oo qayb ka ahaa barnaamijyada horumarinta Soomaaliya oo ay maalgeliyeen hay’ado samafal oo laga leeyahay dalka Sacuudiga ayaa waxaa lagu bixiyey $72 milyan oo dollar si mashaariicdaas oo lahaa saddex weji looga hirgeliyo Soomaaliya.
Baaritaan gudaha ah oo uu sameeyey OIC waxaa eedaymo loo jeediyey Madaxii xafiiska OIC ee Soomaaliya Maxamed Iidle Sabriye iyo Madaxii Arirmaha Bani’aadminnimada ee OIC oo fadhigiisu yahay Jeddah Rami Inshasi. Labadaasi sarkaal ayaa midna la cayriyey kan kalana shaqadii laga wareejiyey.
OIC waxay qirteen in mashaariicdooda Soomaaliya six un loo maamulay, waxayse sheegeen inay isbeddello ku samaynayaan xafiiskooda Soomaaliya.
HOOS KA DHAGEYSO BARNAAMIJKA GALKA BAARISTA EE VOA-DA
Mashaariic la musuqat
Previous articleMuhammadu Buhari oo dib loogu doortay Madaxweynaha Nigeria & Farmaajo oo hambalyo u diray.
Next articleCiidamada Jubbaland oo hor istaagay in soo dhoweyn loo sameeyo xildhibaan ka tirsan Barlamanka Somalia.